ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ဘၪဆဲၫ့စ့ၩလမဲနၫ. | Radio Veritas Asia
ထီးၦနါဂၧၫ့ဆၧနီၪလဖၪတၭႇ မွဲအအီၪဘူၭလၧ ယရုစလံၫ့အကၠီၩ့ႇ ဒဲၦဆီၫ့မီၪ့ဝ့ၫလၧယွၩအဘၩ့အမုး မိအီၪထၪ့ချဲၫ့မၬအကၠီၩ့တၭႇ အဝ့ၫဒၪချဲၩ့အၪထၪ့ဆၧချဲၩ့အဒီၩ့တၭႇ စံၭဝ့ၫႇ- ၦဒိၪလဂၩမိလ့ၩလၧ ထံၫယဲၩ့ခး ယဲၩ့ဘဲၫၥိၭအမိမၩန့အဘၩ့အမုးတၭႇ မိဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.- မွဲအကိၭန့အဎီးအၡၩဆံၫဂၩတၭႇ ဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫၥံၪဆံၫမဲနၫတၭႇ လီၩဘၪအဝ့ၫၥံၪႇ အၪ့ခၩ ဆၧထီးယဂဲၫထဲၩ့ဆံၭ.
အဎီးအၡၩၥံၪမ့ၬလဲၩဝ့ၫတၭႇ အၪ့မၧၫ့ၦလဂၩလ့ၩ ဆီးအဝ့ၫတၭႇ စံၭဝ့ၫႇ အဝ့ၫလဂၩယီၩကဲၪစဎွၩလၧ ပဖၫ့ခိၪႇ ဘၪပၥၭအ့ၬ.
ဆၧမၩအၥၭလၧအမၩန့အဘၩ့အမုးဂီၩ့တၭႇ ဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫတၭႇ အၪ့မၧၫ့ၦကိၭန့ဆၧအဎီးအၡၩ လဖၪလၧအဖ့ၪလၫ့အစ့ၩလၧ အစူၪဖၧၩ့နီၪႇ ဘဲၫၥိၭအမိ ၥ့ၪယၫဝ့ၫလဂၩဘၪလဂၩနီၪႇ မွဲအမၩအၪထၪ့အဆၧဆံၭအၪဆံၭအၪလဲၪနီၪလီၫ.- အခၪ့ထံၭလဂၩဂဲၫစိၩတၭႇ စံၭဝ့ၫႇ ကဆါဧ့ႇ နစ့ၩလမဲနၫနီၪႇ န့အၪထၪ့ယူၭဆံၫမဲနၫယူၭ.- တၭအဝ့ၫဒၪ စံၭအဝ့ၫႇ ဘၪယူၭ ဎီးအၡၩလၧအဂ့ၩဧ့ႇ မွဲနအီၪလၧဆၧၡၩ အဖၫ့ခိၪနလူတီၩယူၭ.
အီၪနဝ့ၫလၧဒိၩ့ဆံၫဒိၩ့အဖၫ့ခိၪဆံၭ.- ၦနံၫဂၩလဂၩဂဲၫဝ့ၫတၭႇ စံၭဝ့ၫႇ ကဆါဧ့ႇ နစ့ၩလမဲနၫနီၪန့အၪထၪ့ယူၭယဲမဲနၫယူၭ.- တၭအဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫနီၪဆ့ႇ အီၪနဝ့ၫလၧဒိၩ့ယဲဒိၩ့ အဖၫ့ခိၪဆံၭ.- အဂူၫဂၩ လဂၩဂဲၫစိၩဝ့ၫတၭႇ စံၭဝ့ၫႇ ကဆါဧ့ႇ ယိခွါႇ နစ့ၩလမဲနၫနီၪႇ လၧယအီၪက့ၪလၧပဝၫအဖၧၩ့နီၪအီၪဝ့ၫလီၫ.
အဂဲးဘဲၫယီၩ ယၥၭမဲၪနၧၩတၭႇ နမွဲၦအကၪတၭႇ ဆၧလၧနလအီၪက့ၪဘၪနီၪႇ နမၩန့နဝ့ၫႇ ဒဲဆၧလၧနလဎွံၪဘၪနီၪႇ နကူၭနဝ့ၫလီၫ.- အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫႇ ဎီးအၡၩလၧ အအၧၩ့လဂၩဧ့ႇ ယမိစ့ၩရၫ့စၪနၧၩလၧနနိၭဒၪနဝ့ၫလီၫ. နၥ့ၪယၫလၧယမွဲၦအကၪတၭႇ ဆၧလၧယလအီၪက့ၪဘၪနီၪႇ ယမၩန့ယဝ့ၫႇ ဆၧလၧယလဎွံၪဘၪနီၪႇ ယကူၭယဝ့ၫလီၫ.-
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭႇ ထီးယအ့ၪဂဲၫ ထဲၩ့တၭဘဲၫၥိၭယမိန့ဘၪယစ့ၩႇ ဒဲအအ့ၪထၪ့နီၪႇ မွဲဘၪနီၫလၧနလဒုၭအၪ့လီးဘၪယစ့ၩလဲၪ.- တၭလီၩ ဘၪၦဆၧၫ့ထုၪ့လၧအနဲၩ့ထံၭနီၪႇ မၩန့အဆၧလမဲနၫနီၪ ဖ့ၪလၫ့ၦအီၪလၧဆံၫမဲနၫလဂၩနီၪဆံၭ.- အဝ့ၫၥံၪ စံၭအဝ့ၫႇ ကဆါဧ့ႇ အဝ့ၫဒၪနီၪအဆၧအီၪယူၭ ဆံၫမဲနၫယူၭ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ယလီၩဘၪနၥံၪလၧ ကယဲၦလၧအန့ဘၪဆၧ လဂၩလါလါနီၪႇ ဆၧမိဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫဒၪလီၫ. ၦလၧအလန့ဘၪဝ့ၫနီၪႇ ထီးဒၪအဆၧအီၪဝ့ၫဒၪလ့ၬတၭႇ ဆၧမိမၩန့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧ အအီၪလီၫ.
အ့ၪမွဲယဒုၪယဒၩလဖၪ လၧအၥၭလအီၪဘၪလၧ ယမိကဲၪစဎွၩနီၪႇ ဂဲၫဆိၬအဝ့ၫၥံၪထီးယီၩတၭႇ မၩၥံၫခွံၬဝ့ၫလၧယမ့ၬယၫဆံၭ.
စံၭဆၧနီၪလဖၪဂီၩ့တၭႇ လ့ၩထၪ့ဝ့ၫလၧယၫလၧ ယရုစလံၫ့အဖၧၩ့ၥၭနီၪလီၫႉ